अनौठो संस्कार–मोटी केटि पाउने पुरुष भाग्यमानी ! - Dna Nepal
अनौठो संस्कार–मोटी केटि पाउने पुरुष भाग्यमानी !
१८ बैशाख २०७६, बुधबार ०१:५९
एजेन्सी, बैशाख १७ ।
र महिला मोटो हुनुले उनीहरु सम्पन्न खानदानमा गनिन्छ । यो मान्यताले लोकप्रियता पाएको मार्टे्नियामा विवाहका लागि पनि केवल मोटी केटीलाई नै मन पराईन्छ । यसक्रममा महिलालाई १६ हजार क्यालोरी खुवाइन्छ ।